25 sq km oo kayn ah iyo duurjoogta waxay kugu sugayaan jardiinada magaalada ugu weyn ee Vienna. Soco, orod, ama ubax ha ku lahaadee geedkan cagaaran, ka dhigi doonaa Viennese fasaxii oo dhameystiran.
Yurub waxaa ka buuxa waxyaabo la yaab leh. Iyada oo aan loo eegeyn inta jeer ee aad u safrtay Yurub, had iyo jeer waxaa jira nolol cusub. Naga 7 magaalooyinka ugu fiican ee loogu talagalay waxqabadyada bannaanka ee Yurub ayaa ku habboon dalxiisayaasha iyo dadka safarka xiisaha leh. Intaa waxaa dheer, kuwiina si fudud u raba inay sahamiyaan bannaanka iyo muuqaalka qurxoon.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "7 Magaalooyinka ugu Wanaagsan ee Waxqabadka Dibadda ee Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/cities-outdoor-activities-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
hawlaha xikmad bannaanka Hawlaha Dibedda Tranride tareen safarka traintravelgermany travelitaly travelswitzerland TravelVienna